Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa u muuqda inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday bishii September, kaddib markii ay guddiga doorashada maanta ku dhawaaqeen natiijadii codbixinta.
Kaddib bilooyin la isla dhexmarayay eedeymo ay dhinacyada isu jeedinayeen oo la xiriiray musuq maasuq, ayay ugu danbeynti guddiga doorashada sheegeen in Ghani uu helay 50. 64 boqolkiiba, natiijadaas oo ka dhigeysa inuu ka badiyay ninki sida aadka ah ula tartamay ee Abdullah Abdullah oo uu guddigu sheegay inuu helay codad dhan 39.52.
Ra’isulwasaarihii hore ee dalkaasi, Gulbuddiin Hekmatyar ayaa soo galay kaalinta saddexaad, isaga oo helay 3.85 codadkii ay dhiibteen ku dhowaad laba milyan oo reer Afghanistan ah.
Abdullah Abdullah ayaa markiiba ku dhawaaqay inuusan aqbali doonin oo uu gudbin doono ashatko.
Natiijadii Axadda maanta soo baxday ayaa markii hore la qorsheeyay in ay guddiga madaxa bannaan ee doorashada ku dhawaaqaan bishii October, balse waxaa dib loogu dhigay sababo lagu sheegay cillado farsamo, eedo musuq maasuq iyo cabasho ka timid musharraxiinta.